トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Anqume esiqhingini ezishisayo langena wamakhaza pachinko
Esikhathini eshintsha pachinko, umshini pachinko iwumkhiqizo. Leli lungiselelo wamakhaza pachinko models, ngokoMthetho nezinye izimboni, siyoba esifanayo njengoba oyibonisayo izimpahla. Ngo wamakhaza pachinko, Shima ufuna ukuthatha imodeli balesi siqhingi futhi uzinze inzalo enkulu e umbukiso Yimani operation ofuna ukugqamisa, futhi kukhona izinto eziningi ukushintsha ukubekwa kanye ukululama ephelele kulesi siqhingi.
kuncike ekutheni wena obeka yimuphi imodeli kunoma isiqhingi, siyazi emehlweni Inhloso imodeli e wamakhaza pachinko. Model, okuyinto eduze indawo kuya
phambi kakhulu port, futhi model billboard and Xintai izitolo eziningi, ngokuvamile imodeli ofuna uthole operation esitebeleni. Ngoba futhi esitebeleni nail ukulungiswa kanye Horukon isethi, kanjani okuhle, kusukela evamile kukhona khona isiqhingi uma kukhona iyasebenza, ngicabanga ukuthi it is Atsuishima ekhethekile.
esitolo, iningi Atsuishima akusona onobuhle ukungena ngemvume Xintai, athi Xintai, futhi kuyinto esiqhingini ukuthi itholakala uyisibonelo ukuthi kuyinto okunengqondo ethandwa.
yiso futhi ivame ukusetshenziswa uma kwenzeka, kodwa kukhona inzuzo ukuthi mancane amathuba okuthi Gase umcimbi kuqhathaniswa imodeli ezincane. Ekhuluma noma ngabe imodeli esinjalo kahle ibekwe kunoma isiqhingi, noma emnyango ngemuva esitolo, iseduze maphakathi esitolo. Esimeni lapho
esiqhingini ngokubheka izitshalo ashisayo, sicela uzame ukunakwa. emnyango Emuva, okwenza kube lula ukusebenza ngisho uthole indawo ehloniphekile enamathiselwe amehlo akho. In the izitolo eduze maphakathi, kuze maphakathi amakhasimende esitolo, thina zisekujuleni ukuza draw.
Kafushane, imodeli ukuthi ifakiwe kule ndawo, ukuthi ngokuvamile kuba imodeli ube show ukuma esitolo. Kuze kube yimanje, ngokwesilinganiso, cishe kwenziwe uma kwenzeka imodeli, ngokuvamile nail ushintsho futhi ugcine nail evamile.
Futhi esiqhingini thola, ngakho ngisho ukusebenza kangcono nemvelo, babe Kuhlangana ngokushesha we big hit okungenzeka, uyophinde abe into ivame ukuba nomphumela edonsa iziteleka. Sivame kuzofihlwa bathambekele ngemvume imodeli and Xintai, kodwa futhi ngezinga elithile ukuzinza Lapho ngoba, eqinisweni, ngicabanga ukuthi inhloso esiqhingini lula phakathi emakhazeni pachinko.
kungokwalokhu isikhathi ukwethula, uyoba esiqhingini ilungiselelo jikelele, isiqhingi onobuhle ilungiselelo, ngokunye kwalokhu uya ukuthi uluphi uhlobo lwebhizinisi, yilokhu siyahluka kakhulu e-pachinko ngamunye emakhazeni. Esiqhingini izingxenye isesihlalweni emnyango, kukhona emakhazeni pachinko ukuza ukubeka zonke inhloso imodeli iso. Ngu
imali ngesilinganiso, kukhona emakhazeni pachinko, njll ukuthi ayenzi isiqhingi ezinjalo. Endabeni ngesilinganiso ukuhlengwa pachinko okusezingeni eliphezulu emakhazeni, ngoba zingaphumi lemali ngisho enkulu imali akufanele kube, kuba nzima amnandi kuka onobuhle uphawu.
ngisho nge high ukuguqulwa ratio, ekukhiqizeni yokuthengisa muhle pachinko eshintsha, kungase kube khona isiqhingi ezinjalo. Pachinko emakhazeni we isilinganiso ukuguqulwa kini, esimweni esingaphansi 3 yen, kufanele kuhlale amaphethelo ahlelwe imodeli ukuthi kuhloswe lokuqala isithunzi.
ngaya esitolo, Okokuqala, zama ukuqinisekisa esiqhingini esiseduze maphakathi esiqhingini isiqinisekiso futhi umnyango emuva eduze nezitolo models ebhodini lesikhangiso. Kuyamangalisa ukuthi sikwenze Kungase kube esiqhingini ukuthi ahlelwe imodeli. Kufanele.
ngaya esitolo, Okokuqala, zama ukuqinisekisa esiqhingini esiseduze maphakathi esiqhingini isiqinisekiso futhi umnyango emuva eduze nezitolo models ebhodini lesikhangiso. Kuyamangalisa ukuthi sikwenze Kungase kube esiqhingini ukuthi ahlelwe imodeli.